गुठीको जग्गामा लाईफस्टाइल हाउजिङको आँखा लागेपछि …. – Samabeshi Khabar
गुठीको जग्गामा लाईफस्टाइल हाउजिङको आँखा लागेपछि ….
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १६:०९ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, १४ कात्तिक (ससं) । प्रशासन र भूमाफियाबीच हुने साँठगाँठले कसरी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि काठमाडौंमा देखिएको छ । बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको विषय सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित लायकु ७ (ग) मा रहेको साविकको गोकणहेम भक्तेश्वर गुठीको २८ रोपनी जग्गा हाउजिङ कम्पनीको नाममा ल्याएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।
विसं २०५८ सालमा नापी हुँदा बाबुकाजी तण्डुकार सहित अन्य चार जनाले भोगचलन गरिरहेको उक्त जग्गा अहिले लाइफस्टाइल हाउजिङको नाममा छ । वि.सं २०६२ सालमा गुठी संस्थान, काठमाडौंको पत्र मालपोतमा दर्ता भएको चलानी नं ३९४४ अनुसार २०६१/०३/२२ गते गुठीको जग्गा रैकर गरिएको छ। सो समयमा तण्डुकारले आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएपछि त्यसको एक हप्तामा मै अर्थात २०६१/३/३१ मा थिरमानसिंह गुरुङ्गलाई बेचेको मालपोत कार्यालय कलंकीमा अभिलेख छ । उनले पनि विं.सं २०६३/१२/११ लाईफ स्टाइल हाउजिङलाई बेचेको मालपोत कार्यालय कलंकीले जनाएको छ । यो हाउजिङका संचालक राजकुमार अग्रवाल हुन ।
हाउजिङले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने बित्तिकै इट्टाको पर्खाल लगाएर जग्गा छुट्याएपनि स्थानीयले सार्वजनीक जग्गा हड्प्न खोजेको भन्दै पर्खाल भत्काइ दिएका थिए । यो जग्गा रैकर गर्ने काममा तण्डुकार र गुरुङसँग अग्रवालको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
तर अग्रवाल भने जग्गा आफूले गुरुङसँग खरिद नगरेको दाबी गर्छन् । ‘मैले गौतम थर गरेका एक व्यक्तिसँग किनेको हो, अरु मान्छे म चिन्दिीन,’ उनले भने । तर मालपोत कार्यालयको विवरण अनुसार उक्त जग्गा अहिलेसम्म दुई पटक मात्र किनबेच भएको छ । अर्थात तण्डुकारबाट गुरुङ र गुरुङबाट सिधै अग्रवालले खरिद गरेका छन् । उनले स्थानीयहरुलाई झुक्याउन यस्तो षड्यन्त्र रचेको स्थानीय बताउछन् ।
उक्त जग्गा अहिले केही स्थानीयले भोचलन गरिरहेका छन् । केही समय अघि स्थानीय जग्गामा धान र मकै खेती गरेका थिए । यसरी जग्गा उपयोग गरेको थाहा पाएपछि अग्रवालले उक्त जग्गा आफ्नो भएकाले त्यहाँ लगाइएको मकै र धान समेत माग गरेको उपभोग गरिरहेका एक स्थानीयले बताए । तर उनीहरुले त्यो सार्वजनीक जग्गा भएको भन्दै दिन नमिल्ने बताएका थिए । स्थानीयलाई समेत बेलाएर उनले आफू नेकपा महासचिब विष्णु पौडेलको साथी भएको भन्दै गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नपाउने कहाँ छ भनेर उल्टो धम्काएर पठाएका थिए । उनले त्यो जग्गाको लालपूर्जा आफूसँग रहेको भन्दै खेती नगर्न भनेका थिए ।
‘त्यो मेरो जग्गा हो, गुठीको हो होइन मलाई थाहा छैन्, मेरो पैसा परेको छ । तर छोड्नै पर्छ भनेपछि छाड्छु विष्णु पौडेल मेरो साथीले बालुवाटारको जग्गा त छोड्नु भयो मलाई त्यो जग्गा छाड्न कुनै ठूलो कुरा छैन् । बिवाद भएन भने भोगचलन गरौला विवाद भएछ भने छाडौला, त्यती पैसा जुवा खेले । भनेर चित्त बुझाउला’ उनले भने ।
पटक पटक कुरा फेर्ने उनले घुमाउरो पारामा जग्गा विवाद नउचालिदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।
उनी पूर्व सांसद समेत हुन । राप्रपाबाट दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिबाट सांसद बनेका थिए । यस्तै, अग्रवाल शिवशक्ति ग्रुपको अध्यक्ष समेत हुन । उनको सो उद्योगले तेल, चामल, दाल, चिनी उत्पादन गर्ने गर्छ ।